Iziphumo zoPhononongo lwe-Intanethi | Martech Zone
Kutshanje siqale ukusebenza noLuhlu luka-Angie kwaye sele isivule amehlo kuthi ukuba mangaphi amashishini afumana izikhokelo kuwo iireyithingi, uphononongo kunye neerhafu. Kumashishini endawo abonelela abathengi babo ngenkonzo enkulu, uphononongo oluhlawulelweyo kuLuhlu luka-Angie yingeniso emsulwa.
NgokweSaveyi yoPhando lokuThengisa amaShishini amaNcinci yiAmerican Express OPEN, amashishini amancinci aseMelika asengathembela kwilizwi lomlomo njengeyona ndlela iphambili yabathengi yokufumana. Okukufutshane ngasemva, nangona kunjalo, yi-Intanethi. Abathengi basekhaya ngoku baxhomekeke kakhulu kumandla enjini yokukhangela xa bethenga kwalapha ekhaya. Sijonga ukuba oku kuthetha ntoni kwishishini lakho elincinci.
Milo, I indawo ekufumana kuyo imveliso, ubeke le infographic kunye xa bethetha namandla okujonga kwakhona kwi-Intanethi.
tags: Uluhlu lukaAngieshishini lendawomiloUphengululo lwe-IntanethiReviews